Cudurka Corona: Muddo intee la eg ayay igu qaadan kartaa inaan ka bogsado? | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Cudurka Corona: Muddo intee la eg ayay igu qaadan kartaa inaan ka...
Da’ada, Jinsiga iyo xaaladaha kale ee dhanka caafimaadka ayaa dhamaantood waxay sabab u noqon karaan inuu si daran qofka ula xanuunsado Covid-19 iyo in kale.
Hay’adda Caafimaadka Adduunka waxay ku qiyaastay in hal ka mid ah 20-kii qof oo cudurka uu ku dhaco uu u baahanayo daryeel caafimad oo deg deg ah, kaas oo laga yaabo inu u baahdo in lagu xiro qalab neefsashada ka caawiya.
Bukaan markii laga daweeyay xanuunka ku sujuuday dibeda isbitaal ku yaalla dalka Morocco
Waxaa jira warar la’isla dhaxmarayo balse aan caddeyn loo haynin oo sheegaya in bukaandaa marka ay soo boksadaan uu jirkooda iska caabin kara inuu fayriska mar kale ku dhaca.
In la fahmo qaabka uu difaaca jirka jawaab uga bixiyo coronavirus marka ii boogsoo ka dib iyo waxtarka uu yeelan akra talaalk.
Previous articleWar deg deg ah Cabdimaalik_muuse_coldoon oo Xabsiga laga sii daayey
Next articleErgeyga Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howl-galka Amisom, Francisco Madeira oo weerar Afkaa ku Qaaday Ahmed Madoobe
General Barise fired and General Afgaduud appointed
Bannaanbaxayaal dab qabadsiiyay xarunta xisbiga Kurdyiinta ee KDP Ciraaq